Ego ole ka ndị ozi na-ebu igwe kwụ otu ebe na-eme na NYC? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Ebube anyịnya nyc - ngwọta na-adịgide adịgide
Ego ole ka ndị ozi na-ebu igwe kwụ otu ebe na-eme na NYC?
Kegwọ ọnwa Onye Ozi Bike na New York
Salagwọ ọnwa Kwa Afọ
Top-akpata $ 48,262 $ 4,021
Pasent 75 $ 40,584 $ 3,382
Nkezi $ 37,542 $ 3,128
Pasent 25 $ 30,712 $ 2,559
N'ime afọ ole na ole gara aga, akụ na ụba ọrụ na-arụ ọrụ na-apụta, ụlọ ọrụ dịka Caviar, Grubhub, Postmates, na Uber na-enyezi onye ọ bụla ohere ịbụ ndị ozi. Dị ka nwoke a: Frankie Gallderizzi. Ọ bụ onye ozi oge niile na New York City. “Amalitere m ihe dị ka afọ abụọ gara aga, a na m achọ ọrụ, m wee dị ka, 'Ọ dị mma, ana m agba ịnyịnya oge niile,' yabụ agara m ụdị pizzia na ihe ndị ọzọ, mana ọ nweghị onye goro ọrụ belụsọ n'abalị.
Ya mere otu enyi gwara m banyere Grubhub. 'Iji doo anya, Frank anaghị arụ ọrụ nke ọma maka Grubhub. Ọ bụ onye ọrụ nke onwe ya na-eji Grubhub arụ ọrụ.
Ọ na-ejikwa ọtụtụ ngwa ndị ọzọ jupụta: Postmates, UberRush, Caviar, na Doordash. Lọ ọrụ ndị a nwere usoro azụmahịa na tarifu dị iche iche. Ọ bụ ezie na Grubhub agaghị enye m ozi ịkwụ ụgwọ ọ bụla, achọpụtara m site na Doordash na ndị na-ebugharị ozi na-enwetakarị $ 5 maka nnyefe ma debe ego zuru ezu.
Ọrụ Uberrush ruru pasent iri asatọ nke ego azụmaahịa nke dollar ise na asaa. Ngwa ndị a niile, gụnyere Caviar na ndị eji ebi akwụkwọ, na-echebara mgbanwe dị ka anya na oge kacha elu. “Ana m arụkarị ọrụ na mgbede, mgbe ahụ ị na-enweta ọtụtụ ego, dịka ọmụmaatụ n'oge nri abalị.
M na-abanye na ngwa maka onye ọ bụla m na-arụ ọrụ ụbọchị ahụ ma na-eche maka nnyefe ndị ahụ. Nweta nnyefe, ọ bụrụ na ọ hasụrụ mmanya dị nro dị ukwuu ma ọ bụ abụọ ị chọghị iwepụ, jụ ya. Ọ bụrụ na ọ dị mma, nara ya.
Gaa n'ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, hụ na ihe niile dị n'ebe ahụ, tinye ya n'akpa gị, gaa n'ụlọ nri ma nyefee ya. Na nke ahụ ugboro ugboro. M na-akwụsịkarị mgbe ike gwụrụ m, mana oge ụfọdụ ị ga-enupụ ya ebe ahụ.
Ọ bụrụ na enwetabeghị m nnukwu ego n'izu a, naanị m ga-agbago ebe ụkwụ na-egbu m mgbu. 'Caviar na Doordash na-ekwu na weebụsaịtị ha na onye ozi nwere ike ime ihe ruru $ 25 otu elekere, mana n'eziokwu, nke ahụ bụ ezigbo ọmarịcha ọchịchọ. Maka ụgwọ opekatampe naanị, nke bụ dollar itoolu na New York, Frankie ga-ebufe ụzọ abụọ n'otu elekere.
Ewepu ụgwọ opekempe! Ọ kwesịrị ime ọsọ ọsọ. “Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkwụ gị ụgwọ, ikwesighi ị kwụ n’okporo igwe kwụ otu ebe ma nọrọ n’okporo ụzọ n’ihi na ha adịghị nwayọ nwayọ ma ndị mmadụ na-atụgharị mgbe niile gaa ogige abụọ. Mgbe ị nwere mmanya atọ ị ga-ebu na ofe, ọ were ụlọ oriri na ọ toụ restaurantụ ahụ ogologo oge iji nweta ihe niile ọnụ yana oge ị ga-enyefe ga-abịa n'oge na-adịghị anya ma ị ga-aga njem kilomita atọ, mgbe ahụ ọ na-enwe nrụgide. Bei Enyela onye na-elekọta ya ụgwọ ihe mberede. ”M ga-asị were ya nwayọ na mbido ruo mgbe ọ mara gị ahụ.
ìgwè ndị na-agba ịnyịnya kọleji
Kwụsị ọkụ niile na-acha uhie uhie, nọrọ n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe ma kpachara anya. Nke ahụ bụ ihe ị ga - eme. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ merụrụ ahụ bụ n’ihi na ha chere na ha nwere ike ime ihe onye ọ bụla na-eme, nke ahụ abụchaghị eziokwu. 'N'ọtụtụ nnyefe mmalite na-ezo aka na onwe ha dị ka ụlọ ọrụ teknụzụ karịa ụlọ ọrụ ụgbọ njem, oghere ahụ nwere ike ịbụ nnukwu ihe ma ọ bụrụ na ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na-enwekarị nsogbu.' ịkọrọ okporo ụzọ na ụgbọala.
Ihe karịrị ndị gbara ịnyịnya ígwè 4,000 merụrụ ahụ na New York City n'afọ gara aga na 14 nwụrụ. N'agbanyeghị nke ahụ, Frankie hụrụ ọtụtụ abamuru. “Nke mbụ, ị nwere ike ịmepụta usoro ihe omume gị, nke dị ịtụnanya.
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, ọkachasị n’oge nsogbu. Mgbe ụfọdụ ọrụ na-atọ ụtọ karịa ịnyagharị naanị maka ikpori ndụ. M nwere ihe dị ka nchegbu nsogbu na otu mgbe na-agba ịnyịnya ígwè m site na okporo ụzọ dị ka naanị ihe na-eme m kpamkpam na oge.
Enweghị m ike icheta ihe ọ bụla, ya mere, ọ nyeere m aka na nchegbu m. M ga-asị na ọtụtụ ndị enweghị ike imeli ime nke a maka ibi ndụ, ma ọ bụ na-atụ egwu ihe egwu dị na ya, ma ọ bụ na-achọghị ịkwọ ụgbọ ahụ ọtụtụ, mana enweela ndị otuiche na-eme nke ahụ maka ibi ndụ. M na-eme ya naanị afọ abụọ, mana nke ahụ adịbeghị anya.
M na-anakọta oge niile, m na-ahụkwa otu ụmụ okorobịa ndị nwere ike ime ihe a maka afọ 20. Echere m na ọ na-ewe ụdị mmadụ pụrụ iche ime nke a ogologo oge. Ọ dịka ọrụ ọ bụla ọzọ gbasara arụ. 'Ọ bụrụ na isiokwu a na-amasị gị ma chọọ ịhụ karịa, pịa ebe a.
Ndị ozi igwe kwụ otu ebe ka dị na New York?
E nwere ihe dị ka 5,000ndị ozi igwe kwụ otu eben'imeNew YorkObodo, karịa ebe ọ bụla ọzọ na mba ahụ, obodo ahụ abụwokwa ebe agbụrụ na-enweghị atụ a na-akwadoghị, nke a na-akpọ nwamba alley, nwere aha dị ka Cranksgiving na Rumble Thru Da Bronx.09.10.2016
Ndi ndị ozi igwe kwụ otu ebe ka dị?
N'ezie, ọ bụghị naanịa ka nwere ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ma ụwa nke azụmahịaịgba ígwèaghọwo ihe dị iche iche ma dị iche iche, n'ihi ọbịbịa nke ọrụ nnyefe nke ngwa. Mgbe ahụ, n'ezie, ị nwetara igwe ọrụ na ndị ọzọigwe kwụ otu ebendị ọrụ ụlọ ahịa na-elekọta ndị a niile na-agba ịnyịnya ígwè.02.05.2018
Enwere m ike izipu ịnyịnya ígwè site na ozi?
Ha na-eburu ngwugwuigwesite n'ụlọ gị nazipuya na adreesị enyere. Dị ka ọ bụlaobu ozi, gịnwere ikesoro ya na-anọ na-emelite na ebe nke gịigwe kwụ otu ebe. Thedị ọnụahịa nke Cyclop maka ibugharị usoro gịIndia!04.01.2020
Ego ole ka ndị na-ebu ebu ígwè na-akwụ?
Ọobodoabụọobu ozi10 / awa, na ndị fọdụrụ £ 5 kwa dobe, Dewhurst kwuru, sị: 'Ndị na-ebu okirikirina Gophr ọ bụghị na oge awakwuo ugwoatụmatụiritebanyere £ 80 / ụbọchị na nkezi, maka ụbọchị 9-hour, nkebuihe dị ka .8 8.88 / awa tupu mmefu. CEO Seb Robert kwuru na email nandị obu ozi kwụrụ ụgwọna nkwụsị ọ bụla, yana opekempe nke £ 3.82 mana '...Mar 11 2017
Ego ole ka ndị NYC nnyefe na-eme?
Nnyefea na-akwụkarị ndị ọrụ ụgwọ na ma ọ bụ dị elu karịa ụgwọ opekata mpe na New York, ugbu a $ 4.50 maka ụlọ oriri na ọ withụ withụ na 10 ma ọ bụ ndị ọrụ ole na ole, ọ bụ ezie na a na-amanye ndị ọrụ na-edeghị akwụkwọ na ịkwụ ụgwọ obere. Atụmatụ na-eburu ngụkọta elu; Giampieri na-ekwu na ọ na-akwụkarị $ 100 na $ 140 karịa oge elekere asatọ.Mar 23 2017
Kilomita ole ka ndị ozi igwe kwụ otu ebe na-agba otu ụbọchị?
Ndị ozi igwe kwụ otu ebena-emekarịnọkwasi300 ruo 800 km (200 ruo 500Puku kwuru puku) kwa izu, mmiri, ili, ma ọ bụ snow. Na-ada ka a otutu? Ugbu a cheedị n'echiche nke nwere ihe ruru kilogram 30 n'azụ gị! Nke ahụ nwere ike ịbụ oke ihe atụ, manana-agba ịnyịnyanaukwuubụlaụbọchịnwee nnukwu ibu ga-ewe ya.Bọchị 10 2017
Kedu akpụkpọ ụkwụ ndị ozi igwe kwụ otu ebe?
Naịgba ígwè,akpụkpọ ụkwụya na obere vidiyo ndị na-agbakwunye na pedal pụrụ iche a na-akpọ 'mkpochapu' (n'agbanyeghị na hamee, n'eziokwu, nwere mkpachị). Yaakpụkpọ ụkwụnke oke ugbu a bụ ofufe ada. 2. Ọ bụrụ na okpomọkụ na-na, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ ihe karịsịa mmiri ụbọchị, ọ dons snowakpụkpọ ụkwụkama.Dec. 27 2019
Kedụ ka m ga-esi nyefee igwe kwụ otu ebe?
Oge na-agba ịnyịnya
Mgbe ị na-etinye iwu site na CyclesUKwebsite, e nyere gị nhọrọ nke ụlọnnyefema ọ bụ Pịa & Anakọta na ndenye ọpụpụ. Anyị na-enye mbupu n'efu n'imeUKNhọrọ, dị na iwu ọ bụla maka ngwa karịa £ 20 naanyịnya igweihe karịrị £ 1000; ị nwekwara ike ịhọrọ nnwere onwe anyị pịa ma nakọta nhọrọ.
Kedụ ka m ga-esi gbaa ụgbọ ịnyịnya ibu ọnụ ala?
Nke kacha mma,dị ọnụ alaụzọụgbọ mmiri BIKESbụ FedEx Ground 3-Day. Ị nwere ikeụgbọ mmiri igwe kwụ otu ebeigbe naigwe kwụ otu ebegbakwunye elekere 30 nke akpa, wdg, maka ihe dịka $ 45 * gafee USA. Banyere SKIS, ọ bụ naanị otu ụzọ ị ga-aga: USPS Prerioti. Ị nwere ikeụgbọ mmiriskis gafee US maka ihe dịka $ 10-25 n'ụzọ a.
Ego ole ka ọ na-eri iji zipu igwe kwụ otu ebe?
Nke anyiọnụahịamaka ọkọlọtọmbupu igwe kwụ otu ebeigbe na-amalite site na £ 16 makaUKalannyefe. Ọ bụrụ na ị chọrọigwe kwụ otu ebeanapụta gị n'echi gịnwere ikekwụọ ụgwọ ntakịrị maka ọrụ ngwa ngwa.Ọnwa Ise 7, 2020
Onwere ndị ọrụ ozi na New York City?
Inye ọrụ nnyefe obibi na nke azụmahịa na NYC na karịrị. Dị ka otu n’ime ndị ozi kacha ochie na ndị a kacha akwanyere ùgwù na New York City, ndị ozi ngwa ngwa anyị na-agba ọsọ dị egwu. Na mgbakwunye, nnyefe ụgbọala anyị na-agbasawanye mgbe niile na nkewa esemokwu na-adị njikere ngwa ngwa, dị irè ma dịkwa ọnụ ahịa maka nsogbu ọ bụla.
Onye bụ onye ozi igwe kwụ otu ebe na Premium Rush?
Wilee bụ otu n’ime ndị na-ebugharị igwe kwụ otu ebe na Manhattan, bụ́ onye na-agba ịnyịnya na nsọtụ ya site n’inwe igwe kwụ otu ebe n’enweghị brek. N'ụbọchị a, Wilee nwere nnyefe nke bara oke uru nke na onye rụrụ arụ na NYC rụrụ arụ, onye chọrọ ego ahụ, na-amalite ịchụ Wilee n'ime obodo ahụ iji nweta ya tupu envelopu anapụta. Onye dere ya Douglas Young (ihe nkiri-nwa okorobịa)
Ego ole ka ndị ozi igwe kwụ otu ebe nọ na New York City?
Enwere ndị ozi ọgba tum tum na 1,500 n'okporo ámá nke New York City. Nwere ike zite ya na email, nye ya aka, faksị ya, lelee ya, mana mgbe ọ nweghị nke ọ bụla na-arụ ọrụ ma ihe a ga-anọrịrị ebe ahụ n'oge a, ịchọrọ anyị.